Jailbreak miyuu macno ku sameynayaa Apple Watch? | Wararka IPhone
Wararka IPad | | Apple Watch, Cydia
Wax badan ayaa bilaabmaya in laga sheego suurtagalnimada in Jailbreak Apple Watch. Saacadda Apple weli lama heli karo si ay uga iibsato dukaamada jirka, laakiin waxaa horey u jiray dhowr haakaris oo caan ah oo aqoonsaday inay daneynayaan "jabsiga" smartwatch-ka si ay uga soo baxaan nidaamka cusub ee ay ku shaqeynayaan, oo loo yaqaan "Watch OS" sida ku xusan bogga Manzana. Marka laga soo tago waxa ay caqabad ku noqon karto xirfadle kasta ama hiwaayad u leh arrimahan amniga, ¿Apple Watch oo ay ku rakiban tahay Cydia ayaa macno u leh dadweynaha guud?
1 Dhibaatooyinka farsamada
2 Arimaha damaanada
3 Qalabka qaraabada
4 Waxaan had iyo jeer haysan doonaa iOS Jailbreak
Jiritaanka dekedda ogaanshaha cudurka ku xiridda suunka ilaa saacadda isla markiiba waxay kicisay xiisaha haakarisku. Haddii ay doonayeen inay wax ka beddelaan saacadda, waa inay isticmaalaysaa isku xirnaanta noocaas ah, maadaama sameynta iyadoo la adeegsanayo isku xirnaanta bluetooth-ga saacaddu ay ka sii dhib badnaan lahayd marka laga reebo cilladda Apple ee sidoo kale si fudud loogu xallin karo barnaamijyada. Waxay u muuqataa in dekeddan loogu talagalay adeegga farsamada lagu qarin doono moodooyinka ugu dambeeya. Helitaanka xarigga si uu ugu xirmo dekeddaasi waxay noqon doontaa suurtagal sida ugu dhakhsaha badan ee waqti macquul ah ku dhammaado oo ay u bilaabato inay ka muuqato dukaamada "takhasuska leh".
Wax kale oo aad u kala duwan ayaa ah isticmaalaha caadiga ahi wuxuu marin u heli karaa fiiladaas, Qiimuhuna wuxuu noqon karaa uun mid kamid ah dhibaatooyinka badan ee helitaankiisa. Tan waa in lagu daraa kakanaanta geedi socodka. Jailbreak waa fududahay, kaliya waa inaad ku xiraa iPhone-gaaga kumbuyuutarka oo aad riixdo badhan. Sida fudud ee loogu talagalay Apple Watch? Waan ka shakisanahay.
Fikrad ahaan, Cydia waa in lagu dhejiyaa Apple Watch sida codsi kasta oo dhinac saddexaad ah sameeya, adoo adeegsanaya kordhinta iminkaba haysata codsiyada la jaan qaada Apple Watch. Laakiin suurtagalnimadani waxay umuuqataa mid aad u fog, maaddaama ay u fududdahay sida Apple Watch ay u diidayso wax xiriir ah oo ay sameyso codsi aan si rasmi ah loo saxiixin.
Wax badan ayaa laga sheegay oo ku saabsan dammaanadda iPhone ama iPad marka la samaynayo Jailbreak. Waa wax ay adag tahay in qof walboo ka walwalo maxaa yeelay way fududdahay sida ugu xirnaanta kombuyuutarkaaga iyo dib u soo celinta, baabi'inta raad kasta oo laga yaabo in uu leeyahay Jailbreak iyo iyadoo aan suurtagal ahayn in adeegga farsamadu ogaan karo. Xaaladda ugu xun, waxaad u baahan tahay inaad ku dhejiso qalabka macruufka habka DFU oo dib u soo celiyo mar dambe. Khataraha ka tagida iPhone ama iPad-kaaga miisaan culus ayaa aad u hooseeya, aadna u hooseeya, in kastoo aan macquul ahayn.
Si kastaba ha noqotee, Apple Watch ma laha ikhtiyaarkaas, illaa aan hadda ka ogaanno mooyee. Haddii aan sameynayno Jailbreak waxaan uga tagnay inuu xirmo, fursadaha soo kabashada waxay noqon laheyd wax yar. Iyadoo aan lahayn fiilo si toos ah saacadda ugala soo baxaysa, iyadoo la adeegsanayo isku xirnaanta Bluetooth waxay umuuqataa mid aad u adag in la furo qalabka haddii ay dhacdo in cilladdu dhacdo. Ma jiraa qof ku dhiiran kara inuu ka tago saacadooda € 500 (ama ka badan) gabi ahaanba aan la isticmaali karin? Shakhsiyan waan ka shakisanahay. Waxay u badan tahay xarigga dekedda baaritaankaas qarsoon, dhibaatada waa la xallin karaa, laakiin sidaan horay u sheegayba, shaki ayaa ka jira in xariggan la heli karo qof walba wuxuu soo jeedinayaa inaysan ahayn suurtagal dhab ah qofka celceliska isticmaala.
Aynu u qaadanno in dhammaan waxyaabaha aan kor ku soo sheegnay aysan runtii aheyn wax dhibaato ah, oo aan leenahay xarigga, in qaabku jiro, iyo inaan qatar u yahay in saacadda aan jebiyo. Runtii maxay ku soo kordhin lahayd? Way u qalantaa Tani waa wax aad looga doodi karo oo hubaal aqriste kasta fikir ayuu ka qabaa, laakiin feker ahaanteyda waa wax aan weli la soo bandhigin. Waa inaan aragnaa waxa u muuqda inay runti ogyihiin qiimaha Cydia uu ku kordhin lahaa Apple Watch. Qiimahaas lagu daray waxay noqon doontaa wax badan oo dadku bilaabaan inay jebiyaan saacadooda qaaliga ah.
Waxaan had iyo jeer haysan doonaa iOS Jailbreak
Runtii waxaan u maleynayaa in iyada oo la tixgelinayo in kiisaska badankood ay noqon doonto isgaarsiinta "iOS to Watch OS", waxaan u maleynayaa in Jailbreak-ka iPhone-ka ama ipad uu wax ku kordhin karo Apple Watch. Xaqiiqdii waad iska dhaafi kartaa xayiraad kasta ama samayn kartaa "badal" adeegsi kasta oo ka mid ah API-yada ay Apple siiso horumariyeyaasha. Cydia ee macruufka waxay noqon doontaa goob aan shaqsi ahaan ugala shaqeeyno khibradeena Apple Watch, inteena badana sidaas ayaan rajeynaynaa. Dhanka kale, tanina mar labaad waa fikrad shaqsiyeed, Jailbreak ee Apple Watch wuxuu noqon doonaa utopia.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Jailbreak miyuu macno ku sameynayaa Apple Watch?
PrismBoard shakhsiyeeyo kumbuyuutarkaaga kumbuyuutarka
Waraaqaha walxaha ayaa u keenaya asal firfircoon iPhone-kaaga